मेरो ब्लगिंग चेकलिस्ट ... | Martech Zone
गत हप्ता मैले ब्रान्डन म्याकजीसँग कफि खाएको थिएँ, हन्टिंगटन बैंकको एक भिपीसँग मोबाइल बैंकिङ। ब्रान्डनको ब्लगमा केहि राम्रो खोजी ईन्जिन रैंकिंग छ - उसको ध्यान केन्द्रित सामग्रीका साथै साथसाथ उहाँ ब्लग गर्दै हुनुहुन्छ कडा कोठामा धन्यवाद।
हामीले उसको ब्लगको बारेमा कुराकानी गर्‍यौं र केही समयको लागि मोबाइलमा कुरा पनि गर्यौं, उनले मलाई केही शान्त अन्तर्दृष्टि प्रदान गरे जुन उद्योग जाँदै छ र यो निकै रोमाञ्चक छ। यहाँ हाम्रो कुराकानीको सार हो - म यसलाई सबैको साथ बाँड्न चाहान्छु।
आला, आला, कोनाडा... माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो। म ब्लगिंगमा ब्रान्डनको छनौटको ईर्ष्यालु छु। मसँग सँधै भए पनि फराकिलो जाल कास्ट गर्नाले मलाई थप माछा पक्रने थियो; तर सत्य बिल्कुलै विपरित छ। किनभने मसँग एकदम कडा कोठा छैन, मँ अन्य साइटहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु। ब्रान्डनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन (अझै)। तपाईं ब्लगिंग को बारे मा सोच्दै को लागी, यहाँ धेरै आवाज बाहिर छ त्यसैले आफ्नै आवृत्ति फेला पार्न कोसिस गर्नुहोस्!
डोमेन नाम चयन गर्दै। ब्रान्डन हाल ब्लगरको साथ होस्ट गरिएको छ। यो जहाँ 'अझै' मेरो अघिल्लो बिन्दुमा विचारको रूपमा आउँदछ। यदि कोहीले मोबाइल बैंकि aboutको बारेमा ब्लगमा निर्णय लिन्छ र उनीहरूले एक महान डोमेन नाम तान्दछन्, ब्रान्डनलाई खोज इन्जिन नतिजा पृष्ठमा धकेल्न सकिन्छ किनभने अन्य व्यक्ति लक्षित डोमेन नामको साथ उभिए।
होस्टिंग बनाम होस्टिंग। ब्लगरमा ब्रान्डनको छनौट उहाँलाई उठाउन र चालु राख्नको लागि उत्तम थियो। ऊ आफ्नो आला मिल्यो र उहाँ लगातार महान् विषयहरूमा ब्लग गर्दै हुनुहुन्छ। ब्लग पक्कै पनि एक विजेता हो र उसलाई केहि ध्यान केन्द्रित गर्दै। यद्यपि, मलाई लाग्दैन कि यसले त्यसलाई पालनपोषण गर्दैछ जति धेरै ध्यान यो हुन सक्छ कि यदि यो उसले आफैंमा होस्ट गरेको थियो। WordPress जस्तो मञ्चमा होस्टिंग गर्दा उसलाई लेआउटको विषयवस्तु बनाउन, केही गहन खोजी इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्न, साथै श्रोताको 'आफ्नो' साइटमा उनीहरूको मार्ग बनाउने अनुमति दिनेछ (ब्ल्गरको अवरोधहरूको सट्टा)।
यहाँ एक उदाहरण छ जुन मैले ब्रान्डन प्रदान गरें, कसरी उसको सामग्री ए मा प्रदर्शित हुन्छ SERP। यदि तपाईले हेर्नुहुन्छ कि कसरी उसको पोष्टहरू र लिंकहरू Google मा अनुक्रमित र प्रदर्शित हुन्छन्, त्यहाँ एक महत्त्वपूर्ण तत्व हराइरहेको छ:
सबै पोष्ट वर्णन याद गर्नुहोस्? धेरै आकर्षक छैन, हो? WordPress संग, एक प्लगइन जस्तै सबै एक एसईओ प्याकमा तपाईंलाई Google मा तपाईंको लिंकहरूसँग सम्बन्धित भएका अंशहरू अनुकूलित गर्न अनुमति दिन्छ। यसले तपाईंलाई केहि लक्षित, कीवर्ड-रिच, र आकर्षक सामग्री लेख्न मद्दत पुर्‍याउँछ जुन तपाईंको साइटमा अधिक क्लिकहरू ड्राइभ गर्दछ।
यहाँ मेरो लिंकहरू जस्तो देखिन्छ।
म SEO को कुनै पनि गुरु बन्ने घोषणा गर्दिन, तर तपाईको खोज इञ्जिन परिणाम भित्र प्रदर्शित सामग्री परिमार्जन गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण छ - दुबै खोजी ईन्जिन, र मान्छेहरू उनीहरूलाई प्रयोग गर्दै।
ई-कॉमर्स र बैंकि संग केहि समान अनुपालन मुद्दाहरु साझा र मोबाइल को लागी विकसित भएको देखिन्छ, म ब्रान्डनको ब्लग मा अलि गहिरो मा खोल्न को लागी अगाडि छु। उसले मलाई पहिले नै केहि महान मोबाइल उद्योग स्रोतहरू देखाएको छ।
टैग: ब्लग शीर्षकहरूब्रान्डन म्याकजीसामग्री शीर्षकडोमेन नामहोस्टिंग बनाम होस्ट गरिएकोहन्टिंगटन बैंकमोबाइल बैंकिंगआलाserp
के शिक्षा यसको उत्तर हो?
मार्क्स 10, 2008 मा 3: 50 PM
जबकि मँ सहमत छु कि आला हिड्नको लागि मार्ग हो, ब्लग सुरु गर्ने दृष्टिकोणबाट मलाई लाग्छ कि यो अलि जोखिमपूर्ण छ।
मँ मेरो जाल अलि चौडाई कास्ट गर्न अझ झुकाव राख्छु र त्यसपछि यसलाई तल संकुचित गर्छु किनकि मेरो ब्ल्ग प्रगति हुँदैछ… मेरो कोठा बाहिर निकाल्छ। सफलताको लागि एक सुरक्षित मार्गको रूपमा।
मार्क्स 10, 2008 मा 4: 43 PM
यदि मैले यो सबै गर्न सक्दछु, मसँग to देखि blo ब्लगहरू थिए - प्रत्येक विषय क्षेत्रको साथ एक। मलाई लाग्छ कि मान्छेहरूले फिडहरूको लागि किनमेल गर्छन् किन कि तिनीहरूले उत्पादनको लागि किनमेल गरे ... तिनीहरू मिश्रित झोला समात्दैनन्, उनीहरूले चाहेको झोला समात्छन्। 🙂
यसले मलाई मेरो सामग्री केन्द्रित गर्न साथै साइटहरूलाई क्रस-प्रमोट गर्न अनुमति दिनेछ। फराकिलो नेटको साथ जाने समस्या यो हो कि तपाईं साँच्चिकै त्यहाँ पहिले नै बाहिर आउनु भएका सबै कोठा विरूद्ध काम गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन कि तपाईं आफ्नो सामग्री एक उचित मौका दिनुहुन्छ।
मार्क्स 11, 2008 मा 12: 35 PM
हो, वास्तवमै मैले तपाईंको दृष्टिकोण हेर्छु। र जबकि यो सम्भवतः अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ, यो लामो समय मा एक राम्रो भुक्तानी प्रदान गर्नेछ। (वास्तवमै केहि पनि मनपर्दछ)
मार्स 13, 2008 मा 4: 01 एएम
All in One SEO Pack को लागि रिमाइन्डरको लागि धन्यवाद - मेरो लाग्दछु म ट्यागको मुनि पोष्टको शीर्षक अनुभागमा प्रतिलिपि लेख्छु?
इ England्ल्यान्डबाट शुभकामना!
मार्स 13, 2008 मा 10: 18 एएम
धन्यबाद (पोखरीको यस पट्टिबाट),
मार्स 13, 2008 मा 10: 25 एएम
धन्यवाद डग! 🙂
आशा छ तपाई संग सबै राम्रो छ। मैले तपाईंलाई केही बेर ब्लग पढेको छु र यो अत्यन्त उपयोगी भएको पाएमा धन्यवाद!
मार्क्स 13, 2008 मा 1: 54 PM
म दयालु शब्दहरूको म कदर गर्छु, जोन! म एक व्यस्त केटा भएको छु त्यसैले त्यस्तो प्रतिक्रियाको एक महान स्रोत हो।
मई 2, 2008 मा 10: 10 PM
मलाई क्रेडिट लिन मनपर्छ, तर मेरो Seesmic प्लगइन वास्तवमा एक साइडबार प्लगइन हो तपाईंको अन्तिम भिडियोहरू देखाउनको लागि। म सहमत छु - जो कहिले Seesmic टिप्पणी प्लगइन लेखे एक प्रतिभाशाली हो!
सेप्टेम्बर 30, 2010 मा 10: 17 AM
उत्तम, संक्षिप्त लेख।
मँ ब्ल्गिंगमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ हुँ र केवल आत्म-होस्ट गरिएको वर्डप्रेस विषयवस्तुमा स्विच गरियो जसलाई Suffusion भनिन्छ जसमा सबै भित्रै यसमा निर्मित छ। अति उत्तम।
पोष्टहरूका लागि पनि धन्यवाद।